Kana Chikwata Chako Chemukati Changoita Izvi, Iwe Unenge Uchikunda | Martech Zone
Kana Chikwata Chako Chemukati Changoita Izvi, Unenge Uchikunda
Svondo, June 25, 2017 Muvhuro, June 26, 2017 Douglas Karr
Kune akawanda ezvinyorwa kunze uko kwatova nezvekuti zvinotyisa sei zvirimo. Uye kune mamirioni ezvinyorwa zvekunyora kwakanyanya zvemukati. Nekudaro, ini handitende kuti chero mhando yechinyorwa inonyanya kubatsira. Ini ndinotenda mudzi wehurombo zvemukati usingaite chinhu chimwe chete chinhu - kutsvagisa kwakashata. Kusatsvaga nemusoro wenyaya, vateereri, zvinangwa, makwikwi, nezvimwewo zviri kukonzera zvinotyisa zvemukati izvo zvisina zvinhu zvinodiwa kuti vakunde.
Vatengesi vanoda kushandisa yakawanda kushambadzira zvemukati, asi ivo vachiri kunetsekana nekugadzira zvemukati zvemukati (60%) uye kuyera mashandiro (57%). Sujan Patel
Kwete chete isu tiri kunetseka kuburitsa uye kuyera edu ehupenyu marongero, isu tiri kunyatso kuburitsa zvimwe zvemukati kupfuura zvingatogona kudyiwa. Shamwari yangu yakanaka Mark Schaefer, anosheedza izvi kugutsikana.
Ndinoziva kuti iwe uri pasi pechinhu chakakanganiswa kubva kune zvinowedzera zvinoshamisa zvemukati. Zvekuti ini ndingo chengetedza iyo "mindhare" yandinayo nhasi pablog rino, ndichafanirwa kugadzira zvirinani zvirimo, izvo zvechokwadi zvinotora zvakanyanya nguva. Ini ndichafanirwa kubhadhara Facebook nevamwe kuti ndikupe iwe mukana wekuzviona nekuda kwemakwikwi emukati ekutarisisa. Maka Schaefer
Dambudziko riri kuramba richitambudza vashambadziri mumakore mashoma apfuura, saka ndanga ndichishanda nemasangano akasiyana edzidzo mukugadzira makosi avo ekushambadzira zvemukati. Pakazara, ini ndakagadzira yedu agile kushambadzira rwendo, uye iko kudzidziswa mukati kunosanganisira maitiro ezvikwata zvedu ekuvandudza zvemukati zvevatengi vedu uye nezvedu zvivakwa.
Hazvisi nyore uye zvinoda kushanda nesimba, asi heino chinyorwa chekuona kuti timu yako iri kuzoburitsa zvakanakisa zvemukati zvinogoneka:
Kukunda Zvemukati Zvekutarisa
zvinangwa - Chii chauri kuyedza kuwana nezvako zvemukati? Icho chiri kutsikiswa kuvaka ruzivo, kubatanidzwa, chiremera, kutyaira shanduko, kugadzirisa kuchengetedza, kusimudzira vatengi, kana kuvandudza ruzivo rwevatengi rwese? Iwe uri kuyera sei kuti kana kwete chaicho chakashanda?
Vateereri - Uri kunyorera ani uye ivo varipi? Izvi hazvingoratidzi chete kuti iwe unogadzira sei zvemukati, zvichakutungamira iwe kushambadza nekusimudzira zvemukati zvako pamapuratifomu akasiyana kana mune akasiyana masvikiro.
musika - Zvemukati zvako zvichaita sei chiratidzo muindasitiri yako? Chii chinodiwa kuti utungamire kutarisisa uye kuita?
tsvakurudzo - Ndeapi manhamba ari kunze uko anotsigira zvemukati? Huwandu hwacho hunowanzo kuwanikwa zvirinyore uye nyore kuwana. Tichishandisa Google, semuenzaniso, isu takatarisa kumusoro zvemukati zvekushambadzira manhamba kuti tiwane Sujan's quote pamusoro.
makwikwi - Ndezvipi zvemukati zvakagadzirwa nemakwikwi ako pamusoro wenyaya? Iwe unogona sei kukunda zvirimo? Isu tinowanzo ita yakapusa SWOT (Simba, Kushaya simba, Mikana, Zvinotyisidzira) zvemutengi wedu uye nemusoro wenyaya wekubatanidza kusiyanisa uye kunyatso tyaira zvinangwa zvavo kumba. Uchishandisa Semrush uye Buzzsumo, isu tinogona kuongorora yakanakisa chinzvimbo uye zvakagovaniswa zvakanyanya zvemukati pane icho chinyorwa.
midziyo - Yakaratidzwa mifananidzo, madhayagiramu, anotsigira screenshots, odhiyo, vhidhiyo… ndezvipi zvimwe zvese zvinhu zvaunogona kusanganisa mune zvako zvemukati kuti uone kuti ndizvo kukunda zvirimo?
kunyora - Maitiro edu ekunyora, girama, chiperengo, kutsanangura dambudziko, kugadzirisa rairo yedu, kugadzira kudaidzira-kuita ... zvese zvakakosha kuburitsa zvirimo zvakafanira kutariswa nevateereri vedu.
Kunyangwe iri tweet, chinyorwa, kana chena bepa, isu tinoramba tichiona kubudirira kana isu tavandudza pre-Assembly mutsara wekuvandudza zvirimo. Pamapurojekiti mazhinji, isu tinoshanda nemapoka akapatsanuka kubva pasirese pasirese kuunza pamwe zviwanikwa zvakakosha kuti tigadzire zvirimo zvikuru. Tine zvikwata zvekutsvagisa zvekutora manhamba uye vanokurudzira, vadzidzi vekuongorora, zvikwata zvemadhizaini, uye sarudzo yevanyori vanosarudzwa nemaoko maitiro avo uye kugona pamisoro.
Uye kunyangwe mushure mekutsikisa zvirimo, hatisati tapedza. Isu tinoona mashandiro ainoita pakutsvaga uye nemagariro, gadziridza mazita uye meta tsananguro dzekuita kwakanyanya, kusimudzira zvekare zvinyorwa zvine magirafu nemavhidhiyo, uye dzimwe nguva kutokororazve zvinyorwa sezvinyorwa zvitsva pazvinenge zvine musoro. Sarudzo yega yega zvine chekuita nezviri mukati medu inoitwa kuti ive nechokwadi chekuti ndizvo kuhwina, kwete kungobudiswa chete.
Tags: Vateererisimbakuzivazvemukati zvemidziyoContent Marketingzvemukati zvinangwa zvekushambadziravatengi vanozivakutyaira kutendeukaKubatanakunatsiridza kuchengetedzakutsvakurudza misikaMikanatsvakurudzosimbaswotZvinotyisaupsell vatengiUterakukunda zvirimokunyora
Vecteezy Mupepeti: Yemahara SVG Mhariri Pamhepo
Gated kana Isina-Gated Zvemukati: Rini? Sei? Sei…
Jun 25, 2017 pa 11: 59 PM
Ndinobvumirana nezvawakanongedzera. Tsvagurudzo yakadzama ndicho chinhu chekutanga chinodiwa chekubvuta chinyorwa chinonakidza chinowanzo kuwedzera kukosha kuvanhu. Iyo skyscraper nzira neBrain Dean muenzaniso. Kugadzira yakadzama chinyorwa chakanyanyo tarisa pane chaiwo mapini einongedzo niche ichapa zvirinani mhedzisiro. Izvo zvinobatsirawo kumiririra iro bhizinesi seyakavimbika / ine chiremera chiratidzo.